VA - Romanson Milestone 13 [2013 Album] - Mg Shan Lay
Home ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း Album Bunny Phyoe Rဇာနည် Snare Various Artists ချမ်းချမ်း စန္ဒီမြင့်လွင် ဆိုတေး နီနီခင်ဇော် ဖြူဖြူကျော်သိန်း နိုင်းဝမ်း VA - Romanson Milestone 13 [2013 Album]
VA - Romanson Milestone 13 [2013 Album]
3:28:00 PM ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း, Album, Bunny Phyoe, Rဇာနည်, Snare, Various Artists, ချမ်းချမ်း, စန္ဒီမြင့်လွင်, ဆိုတေး, နီနီခင်ဇော်, ဖြူဖြူကျော်သိန်း, နိုင်းဝမ်း,
1. မငြိုငြင်ပါဘူး - Rဇာနည်
2. အရောင်မဆိုးနဲ့ - နိုင်းဝမ်း ၊ နီနီခင်ဇော်
3. မမောနိုင်သေးဘူး - သြရသ ၊ နီနီခင်ဇော်
4. အပါးတော် - Idiots
5. မယုံတော့ဘူး - ဖြူဖြူကျော်သိန်း
6. သစ္စာ - ဘန်နီဖြိုး
7. မင်းအချစ်တွေနဲ့ - ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း
8. လွမ်းခြင်း - NOV 24
9. လိုနေတာကမင်း - စန္ဒီမြင့်လွင်
10. ဟုတ် ! - Snare
11. အဖြူရောင်ကန့်လန့်ကာ - ချမ်းချမ်း
12. မွေးနေ့လက်ဆောင်များ - နီနီခင်ဇော် ၊ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်
13. အချိန် - နိုင်းဝမ်း ၊ မို့မို့လွင် ၊ ခင်စုစုနိုင်
Tags # ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း # Album # Bunny Phyoe # Rဇာနည် # Snare # Various Artists # ချမ်းချမ်း # စန္ဒီမြင့်လွင် # ဆိုတေး # နီနီခင်ဇော် # ဖြူဖြူကျော်သိန်း # နိုင်းဝမ်း
Labels: ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း, Album, Bunny Phyoe, Rဇာနည်, Snare, Various Artists, ချမ်းချမ်း, စန္ဒီမြင့်လွင်, ဆိုတေး, နီနီခင်ဇော်, ဖြူဖြူကျော်သိန်း, နိုင်းဝမ်း